01/06/2018 admintriatra 0
Aleo manontanitany foana, toa izay manaotao foana. Manoloana ny didy navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC), ny 25 mey lasa teo, dia manao rano lava ireo fangataham-panazavana tonga eny anivon’ity andrim-panjakana ity ny amin’ny …Tohiny
Fanelanelanana : Malok’ila ilay fihaonana an-tampon’ny Filoham-pirenena
Manjavozavo. Tontosaina eny amin’ny CCI Ivato ary hitohy anio ny hetsika fanelanelanana ataon’ny komitin’ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Malok’ila ilay fihaonana an-tampon’ny filoham-pirenana nokarakarain’izy ireo, satria dia tsy tonga teny an-toerana ireo filoham-pirenena telo …Tohiny
Ambatofinandrahana : Dahalo miisa 15 lavon’ny zandary
Tsy ahitam-pitsaharany ny resaka fanafihan-dahalo any amin’iny faritr’Amoron’i Mania iny, ary isan’ny lasibatra matetika amin’izany ny distrikan’Ambatofinandrahana. Dahalo miisa 15 indray mantsy no lavon’ny zandary sy ny fokonolona tany an-toerana taorian’ny fanarahan-dia sy ny fifandonana …Tohiny
Anjatony ny olona efa nohenoina teny anivon’ny Bianco, raha ny 51 tamin’ireo no nampidirina am-ponja vonjimaika vokatry ny fanaovana kolikoly. Araka izany dia fantatra fa isan’ny nohenoina tamin’izany ny minisitra miisa roa sy solombavambahoaka roa, …Tohiny